'Ukuphefumla Dlala' aka Strangulation inyuka ngokukhawuleza-Isiseko soMvuzo
Ikhaya Iibhulogi zeendaba 'Ukuphefumla Dlala' aka Strangulation inyuka ngokukhawuleza
lawula888 11ti Septemba 2020 Iindaba zamva
Kwakothusa ukuva intombazana yesikolo eneminyaka eli-14 ubudala isazisa ukuba "ikink". Siphambi kwabanye abantu abancinci abangama-20 kwintetho malunga nobungozi obunokubakho kwi-intanethi ye-intanethi. Oko sele kudlule iminyaka emithathu. 'Ukudlala ngokuphefumla' okanye 'ukudlala umoya' kunokuba yingozi. Umzi mveliso we-porn kunye neepundits zayo ziye zaphinda zabuya nommiselo ongabulali ngenxa yoko kuvakala kukhuselekile kwaye kumnandi.
Ngelishwa, kwiimeko ezinje UGrace Millane, "Ukudlala umoya" kunokuya kude kakhulu. UGrace wayengumbhexeshi waseBritane eNew Zealand. Umfana omncinci awayedibene naye kwi-Intanethi ngokumkrwitsha ngokuhlaselwa ngokwesondo. Ude ekude ngaphandle. Yimidlalo yesondo epholileyo, ehlekisayo yolutsha namhlanje.
Kwinqaku elihle likaLouise Perry kwi-Standpoint Magazine, sifunda malunga entsha uphando NguGqirha Helen Bichard. UGqr Bichard ngugqirha kwiNkonzo yoKwenzakala kweBongo yaseWales. Uthetha “ngothotho lokonzakala okubangelwa kukukrwitshwa okungabulali kunokubandakanya ukubanjwa kwentliziyo, ukubethwa sisisu, ukuphuma kwesisu, ukungakwazi ukuzibamba, ukuphazamiseka ekuthetheni, ukuxhuzula, ukukhubazeka, kunye nezinye iindlela zokulimala kwengqondo ixesha elide.” Ugqirha Bichard uqhubeka athi "ukwenzakala okubangelwa kukukrwitshwa okungabulali kunokungabonakali ngamehlo, okanye kungabonakala kwiiyure okanye kwiintsuku emva kolo hlaselo, oko kuthetha ukuba azicacanga kakhulu kunokwenzakala okunje ngamanxeba okanye ukwaphuka. amathambo, kwaye unokuphoswa xa kusenziwa uphando lwamapolisa. ”
Olona lwakhiwo lusemngciphekweni wokuqunjelwa (U-Bichard et al., 2020)
Amadoda akrwitsha abafazi
Ukukhubazeka kwenziwa ngokungaphaya ngamadoda ngokuchasene nabasetyhini. Iya isiba yinto eqhelekileyo kumatyala obundlobongela basekhaya. INew Zealand yazisa ityala lolwaphulo-mthetho lokungaKhubazeki ngokwesondo okungasekhoyo ngo-2018. Ukusukela ngoJanuwari ukuya kuJuni ngowama-2019 amatyala angaphaya kwama-700 axelwe eNew Zealand, malunga ne-4 ngosuku.
Ilungu lePalamente likaHarriet kunye namanye amalungu ePalamente bazama ukukuthintela ukuzikhusela ekubulaleni abantu ngokwesini. I-Brexit kwaye ngoku i-Covid-19 ikulibazisile ukugqithiswa koMthetho oYilwayo ePalamente. Abanye bayibiza ngokuba yi "50 Shades of Grey" yokuzikhusela ekubulaleni ngexesha lokwabelana ngesondo. UHarmann ebizwa emva ngo-Epreli 2020 "ukuyeka oku kungabikho kokusesikweni" kwezokhuselo lomdlalo wesini oko kuthetha ukuba indoda evuma ukuba ibangele ukwenzakala okubulala umfazi "ngokoqobo ubaleka nokubulala".
Kuya kufuneka sazi ukuba inkcubeko inokuyigqwetha njani indlela yokuziphatha ngokwesondo, ngakumbi kubantu abancinci, ngokubonisa ubundlobongela obuvumayo kumaqabane ezesondo ngaphandle kokubona umngcipheko wobungozi obubandakanyekileyo.
Ngokutsho Ucwaningo lwe-Sunday Times lwe-porn Kwi-2019 kwindlela i-intanethi ye-intanethi etshintsha ngayo isimo sengqondo sesini, ngokuphindwe kabini kwabasetyhini abaselula njengabafana kwiGen Z zilinganise i-BDSM kunye nesondo esibuhlungu njengeentlobo zabo ezizithandayo zoononophala.
Uhlaziyo lwe-11 ngo-Novemba 2020: Nali inqaku elivela kuMgcini malunga imidlalo yesondo ihambe gwenxa.